Globalist Agenda -Zulu – Pyramidion
Globalist Agenda -Zulu
Kusukela ekuqaleni kwe-Illuminati, ngaphambi kokubhalwa kwezifungo zethu zaphakade noma ukukhuluma ngezifungo zethu njengabavikeli besintu, inhlangano yethu ithembele emgomweni wokugcina womhlaba womhlaba. Umbono wethu ngekusasa uyiplanethi ebumbene ngaphandle kwemingcele yezwe, elawulwa yizinhlobo zabantu ezinhle kakhulu futhi ezikhanyayo, lapho bonke abantu, kuzo zonke izindawo, bangahlala kakhulu khona.
Umphakathi we-globalism kuzosho ukulahlwa kokwehlukana phakathi kwamazwe kanye nokuphela kweminyaka eyikhulu yezimpi ezilwelwe umhlaba nezimpahla zawo. Kuyindlela yokuqongelela nokuqongelela izinsizakusebenza ngokweqile zezwe elithile ngenkathi abantu belinye izwe belamba. Kungumqondo wokuthi bonke abantu bangabantu ngabanye futhi bayingxenye yomndeni owandisiwe wezilwane, nokuthi akekho umuntu okufanele ashiywe nje ngenxa yengozi engahleliwe yalapho azalelwa khona.
Ku-Age War yempi yamanje, abacebile kufanele baqoqe izimpahla zabo ukuqinisekisa ukuphepha kwezingane zabo ngalesi sikhathi sezingxabano. Ama-obelis abo kanye nefektri bangakhiwa kuphela ngomsebenzi wezixuku ezidingekayo.
Kepha iminyaka ehlukile icishe ifike kithi – impucuko yasemva kokusebenza elondolozwe yimishini yokuzimela futhi inikwe amandla angenamkhawulo. ENkathini ezayo ye-Illuminatiam, bonke abafuna ingcebo bathola ingcebo abayifanele.
INDLELA ENTSHA EMHLABENI, KUNESIQEMBU SOKUPHILA NOKUHLELWA KOMUNYE WONKE
Uhlelo lwethu lwale planethi lubona abantu abangahlukaniswanga izizwe ngokuya ngezindawo zabo, ukubukeka komzimba, noma ukufinyelela izinsiza. Esikhundleni salokho, wonke umuntu uyingxenye eyodwa yohlelo lomhlaba wonke lapho ukukhetha kwabo kunomthelela kukho konke. Wonke umuntu uyisiqeshana esibalulekile somshini omkhulu osizuzisa sonke isintu. Wonke umuntu unenkululeko yokuthola inhloso yakhe, alandele intshisekelo yakhe, azenze ngcono, futhi abheke ukuthi imizamo yabo inegalelo kanjani ezimpilweni zabanye abayizigidi eziyizinkulungwane eziyisishiyagalombili – esikhundleni sokuzikhonza bona kanye nezidingo zabo.
Ubumbano oluphelele lwe-Globalism luyingxenye yombono wethu we-utopian wokuthuthukiswa kwesintu- i-oda lomhlaba elisha leminyaka. Kepha kukhona umgwaqo omude futhi onzima osazodingeka, futhi kunezinyathelo eziningi okufanele uzithathe ngaphambi kokuba imingcele yabantu isulwe.
UKUTHOBEKA AKUYONA IMIDLALO YABANGANE abayi-8,000,000,000; YIZIQINISEKISO ZE-1 TIMES 8,000,000,000
Selokhu abahlali bokuqala bomhlaba baqala ukuhlangana babe ngamaphakethe ukuze bahlanganyele izinsiza zomphakathi, abantu baye bazithola bemdonselwa ngokwemvelo emiphakathini efana kakhulu nezinkolelo zabo zofuzo nokwakheka kofuzo. Ngokwakha izizwe, abantu bahlukanise lo mhlaba waba izigaba ezizovumela amasiko okukholwa ahlukahlukene kakhulu namasiko ukuthi abe nethuba lokukhula futhi athuthuke ngokomzimba.
Kepha kulezi zikhathi zakuqala, izakhamizi zalo mhlaba zingaxhumana kuphela nalabo abaseduze ngokwezindawo, zingenabo ubuchwepheshe bokwabelana ngemibono nemibono ngokukhululeka njengoba benza manje. Sekuyizinkulungwane zeminyaka, umuntu ngakolunye uhlangothi lweplanethi engabeka izinkolelo zabo mayelana nenjongo yabo endaweni yonke ngaphandle kokuzwa ngezinkolelo zomuntu ngakolunye uhlangothi lweplanethi efanayo – ngaphandle kokuthola ithuba lokwakha ukungabaza kanye babhekane nemibuzo ezophonsela inselelo futhi ithuthukise umbono wabo ngomhlaba.
Yize imibono eminingi yokuziphatha eyakhiwa abantu bokuqala igcwele ubuhle, izingxenye eziningi zezimfundiso zokuqala ziye zangena ekuvinjelweni komgwaqo okuthintela ukuqhubeka kwesintu. Le mibono ifakwe ngokujulile emqondweni womuntu kangangokuba izakhamizi ezifuna iqiniso kumele zivame ukubuza izinkolelo zazo ezijulile ngaphambi kokuba zikubone okusobala phambi kwazo.
Lapho belahlekelwa isipiliyoni nalabo abakholwa ngokwehlukile, abantu baqala ukwesaba “Okunye” – ubukhulu obungaqondakali besintu okungenzeka abufani nabo. Lokhu kwesaba kudalulwe kubantu ngokujulile kangangokuba kudinga izizukulwane ukuba zilungiswe. Izinkulungwane zeminyaka zokungathembani ziholele ezimpini ezilandelwa ukuphindisela; ukuhlasela okulandelwa ukuziphindisela; ukuphanga kulandelwe ukushiswa kwemizi yabahlaseli. Kuze kube namuhla, abantu abaningi kakhulu benqaba ukubona bonke abantu njengengxenye yeqembu elilwela ukusinda ekuqothulweni.
Abantu abakwazi ukuphoqwa ukuthula. Isikhathi kuphela nokukholisa okungakholisa abantu ngamandla abo eqiniso lapho besebenzela ukuthuthuka kweqoqo esikhundleni sokucebisa umuntu.
NGOKUXHUMANA KAHLE KUSUKA KUKHONA OKUFUNILE, AKUKHO BUNGCWELE KANYE AKUKHO BAMUKILE – KUPHELA I-RICH NE-RICHER
Labo abathole ingcebo enkulu bayaqonda ukuthi imali imane nje iguqula umzamo ube yinani: indlela yokulinganisa imizamo yomuntu oyedwa futhi uyihumushele kunombolo engasetshenziswa ukuthenga imizamo yomunye umuntu. Umakhi uguqula imali ekuthengiseni umsebenzi wokuthola nokusika nokulungisa izinto ezenziwe ngamatshe – imali engase isetshenziselwe ukuthenga umsebenzi weqembu, noma udokotela, noma uthisha, noma bengafuni amatshe noma umenzi.
Abanye bangathola inzuzo enkulu kakhulu kangangokuba ngeke bakwazi ukuyisebenzisa empilweni yabo yonke, bashiye imivuzo yemizamo yabo yokuqinisekisa ukuphepha kwezindlalifa zabo.
Kepha kulesi sikhathi sezinxushunxushu, sekukhona ukungalingani okukhulu ekuguqulweni kwemizamo ibe yimali. Kunezingozi eziningi ezingenakubalwa ezima endleleni yalabo abafuna ukukhuphuka phezulu kupiramidi. Yize lo mhlaba ucebe ngokwanele ukuba bonke abantu bahlale e-Abundance, ukwesaba kuqhubele phambili abacebe kakhulu ekuqineni – ukuthathwa ngokweqile kwezizukulwane zabo, okunikezwe ngokwesaba kwabo okungokwemvelo kokuphoqelelwa ukuthi babuyela ebuphofini lapho bonke abantu bevela khona. Ezweni elikhululiwe emaketangeni esidingo, akekho onesizathu sokuqongelela ingcebo noma ukudla, indawo yokuhlala, induduzo, nokuvikeleka okuhlinzekwa yingcebo.
Abanasizathu sokwehla ogibeni lwabaphikisi noma abashokobezi – noma ngisho nasezingozini zecorrupt Global elitist – ngoba abadingi ukuncika emandleni ezepolitiki noma kwabasebenzi abanezikhalazo ukuze basinde. Lapho zonke izidingo zomuntu zihlangabezana nazo, asikho isizathu sokulwa izimpi futhi akunasisusa sokuphanga omakhelwane babo ngezidingo
EGAMENI LAMABILIYONI, UKUZIWA NGULESI SIQINISO SEQINISO SOKUKHANYA.
Kungokhululeka oswele isidingo lapho amaketanga wesintu angaphulwa. Noma inguquko isondela, kufanele sihambe kuloluhambo phakathi komphakathi wanamuhla. Ngisho nalabo abenqabayo ukulalela izingcingo zethu kufanele baqhubeke nokuphila ngokuvikelwa kwethu okuthenjisiwe – noma ngabe ukuyekethisa okwesikhashana kufanele kwenziwe ukuphepha kwabo bonke.
Ukugcinwa kokuhleleka kuphela okungavumela isintu ukuthi sidlule ekudluliseleni kwamandla okunokuthula.
Umsebenzi wokuqala kahulumeni ukuvikela imingcele yawo nabantu abaphakathi kwabo. Ngakho-ke abaholi bezwe abaningi, noma behlanganyela umbono wethu wobuntu obunobunye, kumele balinganise izinhloso zethu nesibopho sokuvikela izizwe zabo ezinsongelweni zamanje zempi. Yize ubumbano lwembulunga yonke luyikusasa lethu, imingcele yezwe yanamuhla ivumela izakhamizi ngazinye ukuba zikhethe ezinhlakeni ezahlukene zohulumeni kanye nohulumeni futhi zihlanganyele nomphakathi obamele ngokuphelele. Kulesi sikhathi sezidubedube, imingcele evikelekile inika amandla izakhamizi ngaphakathi ukuthi ziphile ngesilinganiso esincane sezokuphepha nesiqinisekiso sokuthi ubuntu abusoze buphinde balahle ehlane lokuphazamiseka.
IMINININGWANE YESIKHATHI LAPHO YONKE EZOBHALWA NGOKWAZIWELWE KANYE NEMINYAKA EZIQHAWULEYO ZIYOSHINTSHA INDLELA YOKUGULA
Ukuvikela ubuqotho bohlelo lwethu kulabo abafuna ukubhubhisa, i-Illuminati iphoqelelwe ukuba ishiye imibuzo eminingi ingaphendulwa futhi iqondise amalungu ethu ukuba enze imisebenzi yawo ngasese. Kepha abesabekayo nabathengisi bezindaba ezingezona iqiniso basebenzise ukuthula kuka-Illuminati ukuveza i-ajenda yethu ngokusebenzisa i-lens ehlanekezelwe yokungathembani, besakaza amahemuhemu ngamanga ngezinhloso zethu ukuze nje baqinise ukubamba kwabo amandla. Kufanele kudwetshwe umugqa phakathi kwe-ajenda yokuhlanganisa ubumbano lwe-Illuminati kanye namanga anobuthi we-Corrupt Globalism: ukubekelwa phansi kwenhloso yethu eyehlisa abantu abathile ukuba babe yizisebenzi ezinenombolo futhi isebenza kuphela labo abasemandleni. I-Globalism eyonakele imane nje ingumbala omnandi wegama lamanga lokufihla ubukhosi obabayo obufihla ngaphansi. I-Illuminati ayifuni ukuqeda ubunikazi bempahla yangasese.
Umgomo wethu akuyona ukuqedwa kwezikhali zokuzivikela kepha kungukususwa kwesidingo sezikhali zokuzivikela. Asiphakamisi umphakathi othembela kuhulumeni ukuthi ubanikeze izidingo zabo, kepha ukwanda ngokweqile kwezinsizakusebenza ezenza ukuhweba okungafanele kanye nokuphelelwa ngabasebenzi kuphele.
Abashisekela ukushisa nabomashiqela kuphela abazuza ekuqotshweni kwabantu babo, kepha bayizigcino zesikhathi esiseduze esizayo. Yikuphi injabulo izwe elingathokozela abanye ngenkathi abanye kufanele bahlupheke – uma kungenzeka ukuthi bonke baphile ngenduduzo? Imizamo yangempela isengavuselelwa ngokufanelekile lapho bonke behlala ezindlini kanti abanye bahlala ezigodlweni.
UKUTHOBELA KUSENZA IZINYATHELO EZIHAMBELWE NGOKUQINISEKISA UKUVUNJELWA KOKUVULA KWESIKHATHI SE-ILLUMINATI ISITOLO SEZWE ESISHA.
Ukuxhunyaniswa komhlaba wonke ngesinye sezinyathelo zokuqala eziya enhlosweni yethu yomphakathi ogcwele umhlaba. Ubuchwepheshe bedijithali buhlanganisa iplanethi ngezindlela ezingakaze zibonwe ngaphambili, zivumela imibono ukuthi isabiwe ngokukhululekile futhi ikhuthaze ukuxhumana okuguqula okunye ku-Same, nokungazethembi ekuqondeni.
Ukufinyelela kwethu kufake isisekelo sokwethula imiqondo ephezulu kwizakhamizi ezizokwakha isisekelo esisha saleliplanethi: abafuna ithuba kade benomuzwa wokuthi kunenhloso ejulile yokuba khona kobuntu nemfihlo ejulile ngokwakhiwa kwalo mkhathi okuhlanganiswe kukho konke okuphilayo izinto.
Kungumsebenzi wethu ukuqondisa bonke abafuna lolu shintsho – isibopho sethu somhlaba wonke sokushiya izibonakaliso nezibonakaliso zalabo abafuna indlela yethu. Umuntu akaphoqwa ukuba akholwe. Kufanele bafune izimpendulo zezimfihlakalo ezifanayo futhi bagibela izitebhisi ezifanayo zephiramidi njengoba wonke amalungu enhlangano yethu enza phambi kwabo.
Ungomunye osukile ezigidini ezingawunaki umyalezo wethu. Uzibonile izimpawu zethu futhi uphendule ucingo lwethu, futhi ulandele izinkomba ezikuholele kula magama.
Njengoba ufuna iqiniso nencazelo ngemuva kwemfihlo yempilo nakho konke obekufihliwe esintwini, uhlanganyela nabafuna ukuKhanya kuloluhambo olwaqala kudala ungakazalwa.
UMGOMO KUPHEPHA LOKUTHENGA UKUZE UNGAKWAZI UKUTHOLAKALA, KODWA KUFUNA ISIKHATHI, UKUHLELA, NEMPUMELELO YOKUTHOLA
Maduze nje ubuntu ngeke besabhekana nezingqinamba zesidingo kanye nemigoqo yabasebenzi. Ubuchwepheshe abasafufusa banciphisa ukuthembela kwesintu ezinhlotsheni zamandla anyamalale. Izindlela ezintsha zokwakha eziphrintiwe nezokuhamba ezizimele zizoqeda imfuneko yomzamo wokwakha izakhiwo nokuhambisa izinto, zikhulule izisebenzi ukuthi zikhiqize futhi zidale futhi ziphumelele. Izinsiza ezitholakala kwamanye amaplanethi ziyatholakala futhi ziholela emathubeni amasha angakaze abonwe ngaphakathi kwemingcele yoMhlaba.
Izinsuku ezinkulu kakhulu zobuntu zisengaphambili. Bonke ababone ukuKhanya futhi baphenduka ukulandela ukukhanya kwabo bangamaphayona esigaba esilandelayo sesintu – abahlaziyi bezinguquko ezinkulu kakhulu. Esigabeni esondela ngokushesha se-Illuminatiam, wonke umuntu uzoba munye, futhi oyedwa kwezigidigidi eziyi-8. Unyaka nonyaka, isinyathelo ngesinyathelo, i-Illuminati iyaqhubeka nokuqondisa izakhamizi zalo mhlaba ngokusondele kakhulu kunhloso yethu yokugcina yobumbano lomhlaba.
Ungesabi ikusasa lesintu. Ungesabi imisindo yokuqhuma efana nezikhala zakho ezibomvu njengoba isikhumbuzo kwizigqila zakho zenziwa uthuli. Ungesabi njengoba uhamba umgwaqo ongaphambili futhi izindlela zawo zimnyama ngaphansi kokuwa kobusuku obude.
Ubumnyama bukhombisa ukuvela kokusa ngaphambili. Awusoze waduka uma ulandela ukuKhanya.
Globalist Agenda Zulu
← Globalist Agenda -Afrikaans
Globalist Agenda-Vietnamese →